Gịnị Jesus dere ájá? | Apg29
Gịnị Jesus dere ájá?
Ị ga-ahụ na-adọrọ mmasị azịza!
Bible amaokwu ebe Jizọs dere n'ala (ọ bụ n'ala, bụghị ájá), anyị na-ahụ akụkọ nke-akwa iko egwu na nkume tụgbuo site ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ.
Jọn 8: 6-8. Nke a ha kwuru, nwaa ya ọnwụnwa, na-enwe ihe ibo ya ebubo. Ma Jizọs kpebisiri ala na dere na mkpịsị aka ya n'elu ala. 7 Mgbe ha guzoro na ya jụrụ ya, o biliri wee sị: "Ọ bụ onye na-enweghị mmehie nwere ike igba mbụ ya nkume." 8 O ruru ala na dere n'ala.
A gwara m ozugbo ihe Jizọs dere na ájá. Ị ga-ahụ na-adọrọ mmasị azịza.
Ka anyị na-agụ na dum onodu nke na ịghọta ya mma.
Jọn 8: 2-11
N'isi ụtụtụ ọ laghachiri n'ụlọ nsọ na saịtị. All ndị gbakọtara ya, na ọ nọdụrụ ala ma na-akụzi ha. 3 Mgbe ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii mere si ya a nwaanyị weere na iko. Ha na-etinye ya n'ihu ha 4 wee sị, "Onye Ozizi, nwanyị a jidere na-eme, mgbe ọ kwara iko. 5 Na Iwu Mozis nyere n'iwu ka anyị nkume dị otú ahụ. Gịnị ka ị na-ekwu?" 6 Nke a ha kwuru, nwaa ya ọnwụnwa, na-enwe ihe ibo ya ebubo. Ma Jizọs kpebisiri ala na dere na mkpịsị aka ya n'elu ala. 7 Mgbe ha guzoro na ya jụrụ ya, o biliri wee sị: "Ọ bụ onye na-enweghị mmehie nwere ike igba mbụ ya nkume." 8 Mgbe ahụ, o ruru ala na dere n'ala.9 Mgbe ha nụrụ ya, ha wee lawa, otu otu, ndị okenye na mbu, na ọ fọdụrụ naanị na nwaanyị ahụ guzo n'ebe ahụ. 10 Jesus hulitere wee sị ya, "Nwaanyị, olee ha? Ọ dịghị onye ikpe gị?" 11 Ọ zara, sị, "Ọ dịghị, Onyenwe anyị, ọ dịghị." Jizọs sịrị, "Mụ onwe m amaghịkwa-akatọ gị. Go na mmehie ọ bụla ọzọ!"
Jizọs gosipụtara n'okwu na n'omume
A ma ama, Bible nkebi a, anyị na-emekarị naanị pụta ìhè ihe Jizọs na-ekwu na onye na-enweghị mmehie igba mbụ nkume, na mgbe ahụ, ha wee pụọ gburu site na okwu nke Jesus n'ihi na ha na-enweghị mmehie.
Ma Jizọs na-eme nke na-ede ugboro abụọ bụ n'ala na-mkpịsị aka ya metụtara na ihe ọ na-ekwu.
Nke a mere, ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ. Ha mistook bụghị Jesus ngosipụta.
Mgbe ha nụrụ ihe Jizọs kwuru na hụrụ ya ngosipụta, ya mere ha maara kpọmkwem ihe ọ pụtara. Ha nwere ike Bible n'ime na si na maara ihe ọ bụ.
"Ndị na-ada n'ebe m dị ka a ide na ájá"
Na Jeremiah na Old Testament e dere:
Jehova, olileanya Izrel. Onye ọ bụla nke na-agbahapụ ndị ị ga-abịa ka ọ la n'iyì. Ndị na-ada n'ebe m dị ka a ide na ájá. Ha ahapụwo Jehova, bú isi-iyi nke ndụ na mmiri.
Jizọs gosiri site a omume nke ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ ya dapụrụ na rapuru Chineke.
Mgbe Jizọs kwukwara na ndị na-enweghị mmehie igba mbụ nkume, ha nwere ike ime ihe ọ bụla ọzọ karịa nyak nkume na-eje ije n'ebe n'ihi na Jizọs gosiri site ede ihe n'ala na ha dara site n'ebe Chineke na-ele anya dị ka a ide na ájá.
Gịnị na-eme ka ihe ahụ e dere nke a na-e dere ájá? The blurring nke mmiri na ifufe.
Ikwu site Jeremiah 17:13
Onyenwe anyị bụ na olileanya nke Israel
Dị nnọọ dị ka Jehova na olileanya Izrel, ọ bụ ya bụ olileanya unu. Ị natara Jesus, i nwere a ọdịnihu na olileanya. Ọ bụrụ na ị natara Jesus ga-eme ya tupu ọ bụ akaha.
Onye ọ bụla nke na-agbahapụ ndị ya onwe ya ga-abịa ka ọ la n'iyì
Jide ka Jizọs, dị ka ogologo dị ka ị na-ebi. Mgbe ahụ ị ga-otu ụbọchị ga-abụ njedebe azọpụta mgbe ị na-abịa n'ụlọ heaven. Ma hapụrụ ya, ị ga-ihere. Na ọ dịghị onye chọrọ na-eme ihere?
Ndị na-ada n'ebe m dị ka a ide na ájá.
Nke a bụ a pụtara ìhè na-apụghị imeri emeri nkọwa nke Jesus gosikwara na ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ. Ha ghọtara ozugbo na ihe Jizọs dere na ájá mgbe ha na-eyi egwu nkume ahụ kwara iko, n'ihi na ha maara nke ọma ihe e dere Jeremiah 17:13. E nwere nnukwu nsogbu na-agbahapụ Jehova. The odide nke e dere ájá ga-ehichapu site ifufe na mmiri.
Ha ahapụwo Jehova
Mere yiri onye e dere ájá? N'ihi na ha ahapụwo Jehova.
The isi iyi nke mmiri ndụ
Jizọs bụ mmiri nke ndụ. Anata ya mgbe ahụ su echekwa na-enweta ndụ ebighị ebi. Ahapụ ya na ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ mere. Na ha rapuru isi iyi nke mmiri ndụ dị ka Jeremiah 17:13, wee enweghị ndụ ebighi ebi.